Aragtida qaar ka mid ah Soomaalida Iswiidhan ee doodda miisaaniyadda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Miisaaniyadda dawladda.Photo: Pontus Lundahl / TT
Aragtida qaar ka mid ah Soomaalida Iswiidhan ee doodda miisaaniyadda
Miisaaniyadda dawladda cusub.
La daabacay onsdag 3 december 2014 kl 17.19
Hoggaanka dawladda ee dalka Iswiidhen ayay la soo gudboonaatay xaalad cakiran ee siyaasadeed, middaasi oo salka ku haysa cabsi laga qabo in la rido qorshaha miisaaniyadda dawladda oo maanta lagu soo ban-dhigeyo xarunta baarlamanka dalka Iswiidhen.
Fiid-nimadii arbacadu soo galaysay ayuu madaxa dawladda Stefan Löfven ku casuumay kulan wada xaajood ah oo degdeg ah hoggaamiyeyaasha afarta xisbi ee mucaaradka. Si uu isugu dayo in heshiis laga gaaro miisaaniyadda dawladda oo haddii ay dhacdo qarka loo saaran yahay doorasho cusub oo dalka lagaga dhawaaqo. Waxa se qorshihii raysalwasaaraha ku gacansaydhay xisbiyada mucaaradka ah, iyaga oo cod midaysan ku sheegay in aaney diyaar u ahayn iney Löfven ku garab istaagaan miisaaniyaddiisa, taas beddelkeedana ay u codeeyn doonaan miisaaniyadda wada-jirka ee mucaaradku soo bandhigayaan. Anna Kinberg Batra (M) ayaa mar kale ku celisay in xisbigeedu u codeeynayo miisaaniyadda garabka midig ee mucaaradka - Alliansen:
Ulla Andersson, af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga Bidixda (v) ayaa ku eedaysay xisbiyada garabka midig iney siyaasaddoodu salka ku hayso oo keliya xeelad siyaasadeed, waxaanay sidoo kale xisbiyada mucaaradka ah waydiisay in ay diyaar u yihiin in ay qaadaan masuuliyadda xaaladdan siyaasadeed ee cakiran.
- Waxaad go'aansateen inaad ku xirraataan xisbiga SD. Halka uu xisbiga Moderaterna aanu weli yeelan hoggaamiye. Marka waxaan hayaa dhowr su'aalood - suurtagal ma tahay in siyaasaddii ey bulshadu dhowaantan aqlabiyadda ugu codeeysay in daaqadda laga saaro oo aan baarlamanka laga hir-gelin? Ma waxaad dooneey-saan doorasho cusub inay dalka ka dhacdo? Yaa u taagan kursiga hoggaanka dawladda. Ma Annie Lööf, mise? Waase maxay masuuliyadda idinka saaran siyaasaddan qallaf-san ee xisbiga SD uu wax ku walaaqayo. Taasi waxa ay ahayd Ulla Andersson ka tirsan xisbiga Vänsterpartiet.
Si aanu wax uga ogaano sida ay Soomaalida Sweden u aragto xaaladdan siyaasadeed, waxa aanu codbaahiyaha la dhexqaadnay xaafadaha ay soomaalidu ku badan tahay ee magaalada Stockholm. Cumar Nuur Weheliya iyo Maxamed Cali waxa ay ka mid yihiin Soomaali ku nool xaafadda Rinkeby ee magaalada Stockholm, waxaanay ii sheegeen in ay si dhaw ula socdaan xaaladda siyaasadeed ee dalka Sweden. Mar aan wax ka waydiiyay miisaaniyadda dawladda cusub ee doodda badan dhalisayna waxa ay ii sheegeen in haddii ay miisaaniyaddu dhacdo ay culays weyn ku keeni doonto siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka.
Sidoo kale waxa aan la kulmay Cabdixakiin oo ka mid ah Soomaalida ku nool koonfurta magaalada Stockholm ayaa aaminsan in loo baahan yahay in xal laga gaadho arrinkan si aanay u saamayn dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka.
Dhanka kale Liibaan Aadan ayaa isagu rajo fiican ka qaba in xal wanaagsan laga gaadhi doono xaaladdan siyaasadeed ee uu waddanku ku jiro. Waxaanu sheegay in aan loo baahnayn in la buunbuuniyo xisbiga SD.
Waxa kale oo aan waydiiyay su’aal ku saabsanayd sida ay u arkaan haddii waddanka ay mar kale doorasho ka dhacdo, waa kuwan Cabdiraxmaan Cali iyo Cabdixakiin oo iyagu aaminsan in doorasho cusubi ay culayskeeda wadato.
Laakiin se Liibaan Aadan ayaa isugu qaba in xalkaasi yahay ka u danbeeya oo aanu filay in laysla gaadhi doono.
Intii aanu rayi ururintan ku jiray waxa kale oo aan waydiiyay haddiiba ay doorasho kale dhacdo bal in ay codayn doonaan iyo in kale.